Tirada dadka ku dhacay Covid-19 ayaa kor u dhaafay 42 milyan, halka 1 milyan dad ka badan u… – Hagaag.com
Posted on 23 Oktoobar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Tirada dadka uu ku dhacay caalamka cudurka Coronavirus “Covid-19” ayaa kor u dhaaftay 42 milyan, halka Yurubna ay diiwaan galisay 200 kun oo soo ridanaya maalin kasta ee virus-ka markii ugu horeysay, halka qaadista cudurka ee Hindiya uu kor u dhaafay 7.8 milyan.
Sida laga soo xigtay shabakadda “World Meter”, oo ku takhasustay la socoshada lambarrada iyo tirakoobyada la xiriira fayraska Corona ee dalalka adduunka, tirada dadka uu ku dhacay waxay gaartay 42 milyan iyo 28 kun iyo 805 qof oo cudurka qaba xilligan.
Tirada dadka ka caafimaaday ayaa gaaraya 31 milyan 206 kun iyo 954, halka tirada dadka dhintay ay gaadhay 1 milyan 143 kun iyo 357.
Mareykanka ayaa hor boodaya tirada dadka uu asiibay cudurka oo gaaraya 8 milyan iyo 661 kun iyo 722 qof, halka heerka dhimashaduna uu sii kordhayo, waxaa la diiwaan geliyey 228,381 dhimasho.
Si wax looga qabto cudurka, Hay’adda Dawooyinka ee Mareykanka ayaa soo saartay, shalay, Khamiistii, ogolaansho buuxa oo loogu isticmaali karo daawada “Remdesivir” si loogu daweeyo dadka qaba Covid-19 ee isbitaalada yaalla, ka dib markii ay bixisay oggolaansho shuruud ku xiran oo ku saabsan isticmaalkeeda bishii Maajo ee la soo dhaafay, sida laga soo xigtay shirkadda “Gilead” oo soo saartay dawadan.
Gilead ayaa ku dhawaaqday inay heshay rukhsad ay ku isticmaasho daawada, taas oo lagu iibin doono magaca “Veklury”, iyadoo sii sharraxaysa ayaa tiri in Remdesivir ay tahay daweynta keliya ee gaarka u ah Covid-19, oo ilaa hadda heshay liisan buuxa ka dib markii ay mareen dariiq adag oo baaritaan adag oo kama dambeys ahaa.